INTERACTION OR INTER-ACTION? | News, Art and Ideas For Burma
INTERACTION OR INTER-ACTION?
Filed under: Uncategorized — Nyo Gyi @ 9:40 am
“အင်တာ-အက်ရှင်” လား “အင်တာရက်ရှင်” လား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့ အမေရိကန် (ဆီနေတာ)ဟာ မီဒီယာများ အဆိုအရ ဒေါ်စုက ဘာပြောတယ်ဆိုတာကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတိထားပြီး ပြောဆိုကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ပထမနေ့နဲ့ နောက်နေ့ သတင်းထွက်တာတွေ မတူကြပါ။ အစဦးဆုံး စာလုံးမဲကြီးတွေနဲ့ ထွက်လာတာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ (ဆန်ရှင်) တချို့ ရုတ်သိမ်းမှာကို ကန့်ကွက်မယ် မထင်ပါဘူးတဲ့။ ဒါက (အင်တိုင်-ဆန်ရှင်) အမတ်စကား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာ (မီဒီယာ)တခုကနေ ကျွန်တော့်ကို (အင်တာဗျူး)တုံးက (ဆန်ရှင်)ကိစ္စ္စမှာ ဒေါ်စုက ဒီလို ပြောတယ်လို့ ဆိုတာမှာ ကျွန်တော် သံသယရှိပါတယ်လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ (မီဒီယာ)က သုံး မသုံးတော့ မသိပါ။ နောက်နေ့မှာဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က သူ့ရဲ့ တရားဝင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတစ်ဆင့် ရှင်းလင်းချက်ကို ကြားရတော့ ကျွန်တော့် သံသယဆိုတာ မှန်သွားပါတယ်။
ရှင်းလင်းချက်ထဲမှာ တခုဆက်ရှိပြန်သေးတာက ဘာသာပြန်တာပြောပြော၊ အဓိပ္ပာယ်ကောက်တာဆိုဆို ကျွန်တော် ပြန်ချင်တာ၊ ကောက်ချင်တာနဲ့ နဲနဲလွဲနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ Interaction ဆိုတာပါ။ တချို့က “ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့” “ညှိနှိုင်းဖို့” “ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ” “ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း” စသဖြင့် တာသာပြန် ကောက်ယူကြပြီး၊ တချို့ကတော့ Interaction ကို အတိုင်းသား ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ သတင်းသမားများအဖို့ မြန်ဖို့ကအရေးပါလို့နဲ့ တူပါတယ်။
Interaction ဟာ Inter-action နဲ့မတူပါ။ Inter-action ဆိုတာက တွဲလုပ်တဲ့သဘော ပိုဆောင်ပါမယ်။ Interaction က စကားပြောကြတဲ့ သဘော၊ အပြန်အလှန်သဘော၊ အမြင်ချင်းဖလှယ်တဲ့သဘော၊ ချုပ်လိုက်ရင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပါဘဲ။ လူနှစ်ယောက်တွေ့တာနဲ့ ဆရာနဲ့တပည့်ဖြစ်ရင်တောင် ကနေ့ခေတ်မှာ ဆရာပြောတာချည်း တပည့်က နားထောင်ရတာ မဟုတ်လို့ တစ်ယောက်ကေပြောတာကို ကျန်တစ်ယောက်က သူ့အယူအဆ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ဖက်ပြောတာကို သဘောတူ-မတူ ပြောရတာပါ။ (ဆီမီနာ)တို့ (၀ပ်ရှော့ပ်)တို့မှာလဲ အဓိက ပြောမယ့်လူ ပြောပြီးတဲ့နောက် Questions and comments ကျန်တဲ့လူတွေက မေးလိုတာရော၊ ပြောလိုတာပြောနိုင်တဲ့ အစီအစဉ် ထည့်ပါတယ်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလို Questions and answers အမေး-အဖြေမဟုတ်ပါ။
လူ-လူချင်းမဟုတ်ဘဲ လူနဲ့ ကွန်ပြူတာအကြားမှာရော၊ ကွန်ပြူတာတွေအကြားမှာရော (အင်တာရက်ရှင်) ရှိတာပါဘဲ။ လူနဲ့ တီဗွီအကြား အပြန်အလှန်သဘောပါရင် Interactive လို့ပြောပါတယ်။ Communicate လုပ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “အပြန်အလှန်သဘော” က အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတူနေရင်း-လုပ်ကိုင်ရင်း အပြန်အလှန် ပြောဆိုကြတာဖြစ်လို့ တခုခုကို “ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ” “တွဲလုပ်တဲ့သဘော” နဲ့ ကွာခြားပါတယ်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာ မတိုင်ခင် ညှိနှိုင်းတာရှိရမှာဖြစ်ပြီး၊ ညှိနှိုင်းတာရောက်ဖို့ လုပ်ရမယ့်အဆင့်ကို Interaction အဆင့်လို့ ခေါ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့ “ပြည်ပမှာထက်အရင် ပြည်တွင်းထဲမှာ Interaction လုပ်ဖို့ လိုတယ်” ဆိုတာကို “ကိုယ့်ပြည်ထဲမှာ တာဝန်ရှိသူများအကြား အပြန်အလှန်သဘောပါတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်ဆံမှုတွေ ရှိဖို့ လိုတယ်” လို့ မှတ်ယူသင့်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကပြောသမျှ လိုက်လုပ်ရမယ်၊ မလိုက်ရင် ဘယ်ဥပဒေနဲ့ ညိလို့၊ ဘယ်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်လို့ ဘာပြစ်ဒဏ်၊ ညာပြစ်ဒဏ်ဆိုတာနဲ့ လုံးဝမတူပါ။
အလုပ်ရုံတစ်ခုမှာ စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ အလုပ်သမားတွေကြား Interaction ရှိမှ အလုပ်က တိုးတက်ပါသတဲ့။ မြန်မာပြည် ဆိုတဲ့စက်ရုံကြီး တိုးတက်မလာတာလဲ Interaction မရှိသေးလို့ပါဘဲ။ ဓာတ်ပစ္စ္စည်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တွေ့ရင် ဓာတ်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်လာကလည်း အတူတူပါ။ အနှစ် ၂၀အတွင်း မြန်မာပြည်မှာ ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးတာ Interaction မရှိသေးလို့ပါ။